inPIX သည် SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲတွင် TICO lightweight compression သုံး၍ UHDTV Hybrid SDI / IP အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုကိုပြသသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » intoPIX အဆိုပါ SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression ကို အသုံးပြု. UHDTV Hybrid ကို SDI / IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတင်ဆက်ပေးတယ်
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲ Semtech, Xilinx, တီဗီ-Logic နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောထံမှ UHDTV စပ်အခြေခံအဆောက်အအုံနည်းပညာလည်းပါဝင်သည်
intoPIX, TVLogic, Semtech, Xilinx ထံမှအဆင့်မြင့်နည်းပညာ featuring တစ်ဦးလာမယ့်မျိုးဆက် UHDTV စပ် SDI / IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦကျော် Ultra-high definition ဗီဒီယိုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်၎င်း၏ TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression ၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ FPGA, ASIC နှင့် software များအတွက်ဗွီဒီယိုချုံ့နည်းပညာများတစ်ဦးဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးသရုပ်ပြခြင်းနှင့် ဒီနှစ်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲ, ဟောလိဝုဒ်ကယ်လီဖိုးနီးယား, Dolby အခန်းတဲ 207 ။
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲများ၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ featured Semtech ရဲ့ intoPIX နှင့် တွဲဖက်. အတွက် GS12 cable ကိုတန်းတူရေးနဲ့ GS12141 cable ကိုမောင်းသူအပါအဝင် 12181Gb / s နဲ့ UHD-SDI interface ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, TICO ချုံ့နည်းပညာ, တစ်ဦးအမြင်အာရုံ Lossless, အထူးသထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေါ့ပါးတဲ့ compression ကို အသုံးပြု. ချုံ့ SDI / IP ကိုဖြေရှင်းနည်းများ။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲ TICO ချုံ့ကိုထောက်ပံ့သော FPGA သည် IP-cores ပါဝင်သည်နှင့် SMPTE ပေး ST2022-6 encapsulation တွေကိုသေချာ Xilinx, FPGA ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုဖြေရှင်းချက်၏အဓိကထောက်ပံ့ထားတဲ့အဆင့်မြင့် 55 "12Gb / s နဲ့ UHD-SDI UHDTV နေဖြင့်စောင့်ကြည့် TVLogicကထောက်ပံ့ဦးဆောင်-အစွန်း UHDTV ထုတ်လွှင့် display ကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်တစ်ဦး 12Gb / s နဲ့ UHD-SDI patch ကိုလယ်တစ်ထုတ်လုပ်သူ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောအဆင့်မြင့်ထုတ်လွှင့် patch ကို panel ကထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးပေးသွင်း။
"Hybrid ကို SDI / IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများ SDI နှင့် IP နည်းပညာများပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ယနေ့သဘောပေါက်လျက်ရှိသည်။ UHDTV ပုံရိပ်ကိုပုံစံများကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပ်ချက်ရှေ့ဆက်သွားအတူထိုတူညီသောမျိုးစပ်အခြေခံအဆောက်အအုံယခုမှာလည်းအခြေစိုက်စခန်း-band UHD-SDI နှင့်ထပ်ခိုး compressed 3G-SDI နှင့် IP interfaces ပေါင်းစပ်ထောကျပံ့ပေးရပါမယ် "ဟု Gael Rouvroy, intoPIX ကျော် CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။
"သူတို့ UHDTV enabled အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အဆောက်အဦကို update အဖြစ် intoPIX ရဲ့ TICO အလင်းချုံ့နည်းပညာအသုံးချဖို့တစ်စပ် SDI / IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦအတွက် Semtech ရဲ့ UHD-SDI အစုစု၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ, ထုတ်လွှင့်များ၏အရေးပါသောလိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်လိမ့်မယ်" ဟုယောဟန်ကို Hudson, မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းပညာဒါရိုက်တာကဆိုပါတယ်နှင့် Semtech ရဲ့ Signal သမာဓိကုန်ပစ္စည်း Group မှအသစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး။ "Xilinx, တီဗီ-Logic နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောထံမှအဆင့်မြင့် UHDTV ဖြေရှင်းနည်းများကိုနောက်ထပ်လာမယ့်မျိုးဆက် UHDTV စပ် SDI / IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏လျင်မြန်သောကလေးမွေးစားမောင်းနှင်ပါလိမ့်မယ်။ "
SDI & IP ကိုသက်ရောက် TICO အလင်းချုံ့၏ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ
TICO အလင်းချုံ့: image ကိုနိုင်တဲ့ coding ဆောင်တတ်၏4အထိအမြင်အာရုံ Lossless အရည်အသွေးကို: FPGA နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ pixel လိုင်းအောင်းနေချိန်, မျိုးစုံ coding 'passes ဖို့အားကောင်း, အနိမ့်တန်ခိုးတော်နှင့်အလွန်နိမ့်ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူ 1 ။
TICO SDI encapsulation တွေကိုသေချာ:4နှင့်အတူ TICO အသုံးပြုခြင်း: တစ်ခုတည်း 1G-SDI အဆိုပါ SDI ၏တားမြစ်ထားတန်ဖိုးများကိုရှောင်ရှားစီးပေါ်သို့ 12 ချုံ့, 3G-SDI အချက်ပြမှုများတစ်ခုသို့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျက TICO UHD / 4K သုံးပြီး IP ကိုကျော်စီးသယ်ဆောင်ရန်ဖွ SMPTE ST2022-6 ။
TICO RTP မြေပုံ: SDI encapsulation တွေကိုသေချာမပါဘဲလည်းလွတ်လပ်သော RTP စီးအဖြစ် IP ကိုကျော်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များ:
TICO FPGA & CPU ကို powered ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာ: www.intopix.com/ TICO
12G-SDI 2015 4K ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ compression H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ intoPIX ip isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း SDI Semtech တီဗီ Logic UHD / 4K / HD ကို UHDTV viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို Xilinx 2015-10-28
ယခင်: SMPTE4မှာဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစနစ်များစျေးသစ် 2015K FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module: Commoditizing ဗီဒီယို-ကျော်-IP ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
နောက်တစ်ခု: Macnica အမေရိကနှင့် intoPIX အဆိုပါ SMPTE4နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ RTP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် TICO Lite ချုံ့သုံးပြီး IP ကိုကျော် UHD2015K တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအသစ်တစ်ခု FPGA ရည်ညွှန်းဒီဇိုင်းကိုဆောင်ကြဉ်း